by Asha Mohamud Yusuf
Cirka oo gu’ hoorshoo Hillaac galalacleeyiyo Daruuruhu gufaacada Guur guurayaano Godolkii la hibitiqay. Xareeddii geyiga iyo Goglantahay jidhaanto Godamada ka buuxdoo Balliyadu gingimanyiin Ubaxii gardhooboo Gaasheeyey midabkoo Guntimuhu sinmeenoo Garaacayso laydhii. Dhirtuna ay gun iyo baar Gedafka isku haysoo Laamaha gankoodiyo Faraqii is gaadheen Shinbiruhuna geestood Hadba geesh codkoodii Googooynayaanoo Rahuna gaar isula baxay. Oo labada goorood Gabbalka iyo waagaba Go’bo leeday dhibicdii. Hoobaan guduudiyo Dhafaruur go'ayso Guudku wada casaadooy Garabtaal midhcaanyadu. Jinawgoo gardhooboo Caleentii goshiisiyo Ay guudka qarisoo Gurnaayo uunkii. Goryga iyo caawshiyo Giirr qurux ugadhiyo Garanuug idilkeed Gaan gaanbiyeenoo Hadaba geed magoolkii Mayracad ku goostaan Geeliina dhalayoo Gees wayntu darartoo Adhigiina godol yahay. Xooluhuna gebigood Isha aad la gaadhoo Geesaan fogaynoo Guriga ay ag daqaan. Gabankii la jogiyo Kureygii go'qaatoo Intay hadhac golaysteen Googalysi goodii Googoostay sheekada. Halihii gobaad iyo Gorad ay lahaayeen Oo nirgii ku goohoo Darartii gubaysoo Isu guuxay ololkii Inta goor caweysina Haaneedkii lala galay Danbarkii ku gaaxdiyo Laga gurayo ibihoo Goroofkii la culay iyo Gaawihii la buuxshoo Gebiba beeshu negi tahay Galadaan tilmaamee Geyigeena taaliyo Nimcadaa gadhoodhee Geesaha ka qubatee Cidi weli galaan darain Allahayow na garansii.